राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन-फास्ट तथ्य
रिचर्ड निकक्सन फास्ट तथ्य
संयुक्त राज्य अमेरिका को 37 औं राष्ट्रपति
रिचर्ड निकक्सन (1 913-1994) अमेरिकाको 37 औं राष्ट्रपतिको रूपमा सेवा गर्थे। उनको प्रशासन भियतनाम युद्धको अन्त र पर्यावरण संरक्षण एजेन्सीको निर्माण समावेश थियो। राष्ट्रपति चयन गर्न आफ्नो समिति संग जोडिएको गैरकानूनी गतिविधिको कारण, वाटर्जेट स्क्यान्डल भनिन्छ, नेक्सन99, 1974 मा राष्ट्रपति पदबाट इस्तीफा दिए।
जन्म: जनवरी 9, 1913
मृत्यु: अप्रिल 22, 1 99 4
कार्यालयको अवधि: जनवरी 20, 1968-अगस्त 9, 1974
सर्तहरूको संख्या Elected:2सर्तहरू; दोस्रो अवधिको लागि इस्तीफा
पहिलो लेडी: थिमामा क्याथरीन "पट" रयान
रिचर्ड निक्स उद्धरण
"मानिसहरू परिवर्तन गर्न के अधिकारहरू हाम्रो प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो सिद्धान्तहरू मध्ये एक हो।"
प्रमुख कार्यक्रमहरू जबकि अफिसमा
पहिलो चन्द्रमा (1975 9): नील आर्मस्ट्रांग र बज अल्ड्रिनले चन्द्रमा हिंड्ने पहिलो मानिस बन्ने, जॉन एफ केनेडीको सपना चाँदमा मानिसलाई ल्यान्ड गर्ने र त्यसलाई सुरक्षित रूपमा पृथ्वीमा फर्किन्छन्।
पर्यावरण संरक्षण एजेन्सी (1970): नेक्सनले प्रदूषण कानून लागू गर्न र लागू गर्न राष्ट्रिय शरीरको रूपमा EPA बनायो। नयाँ एजेन्सीको प्रारम्भिक परियोजनाहरु स्वच्छ वायु अधिनियम (1970), फेडरल पर्यावरणीय कीटनाशक नियंत्रण अधिनियम (1972), र स्वच्छ जल अधिनियम (1972) समावेश गरिएको थियो।
26 औं संशोधन (1971): अमेरिकी संविधान अनुदानको लागि 26 औं संशोधन 18 वर्षको उमेरमा द्वितीय विश्वयुद्धको दौडान सुरु भएको लामो समयदेखि बहस समाप्त गर्न र वियतनाम युद्धको समयमा गति प्राप्त गरे। दुवै युद्धमा, अमेरिकिहरु जो मतदान गर्न ज्यादै जवान थिए धेरै सरकार द्वारा युद्धमा पठाइयो जसमा उनीहरूको आवाज थिएन।
निक्सन चीन भ्रमण (1972): नेक्सन राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न वार्ताको लागि एक हप्ता लामो यात्रामा साम्यवादी चीनको भ्रमण गरेर अमेरिका र विश्वभर धेरैलाई आश्चर्यचकित भयो। चीन कोरियाली युद्ध मा अमेरिकी सेना विरुद्ध लडाइयो र दोस्रो विश्वयुद्ध पछि द्वन्द्वको शीत युद्धको समयमा एक कडा प्रतिद्वंद्वी बनेको थियो। निक्सनको भ्रमणले दुईवटा विश्वभरका सबै देशहरूमा पुनर्स्थापित सम्बन्धको सुरुवात शुरु गर्यो।
वियतनाम युद्धको अन्त्य (1973): आधिकारिक रूपमा 1949मा सुरु भएको युद्ध नेक्सनको पहिलो अवधिमा राम्रोसँग समाप्त हुन्छ। सन् 1 997मा अमेरिकाको सेनाबाट निकालिनुभयो, तर वियतनाम भित्र लडाइए पछि केही समय अगाडी बढिसकेपछि सायगोन 1975 मा उत्तर भियतनामीसम्म पुगिसकेनन्।
सम्बन्धित रिचर्ड निकक्स संसाधन
रिचर्ड निकक्सनमा यी थप स्रोतहरूले तपाईंलाई राष्ट्रपति र तिनका बारेमा थप जानकारी प्रदान गर्न सक्छन्।
रिचर्ड नाइसन जीवनी : 37 वा अमेरिकी राष्ट्रपति मा एक विस्तृत विचार, राष्ट्रपति र उनको पछिल्ला राजनीतिक जीवन सहित।
वाटरगेट स्क्यान्डल : वाटरगेट राष्ट्रपतिको घोटालाको साथ पर्याय भएको छ। 1972 मा,5जना मानिसहरु वटर्जेट व्यवसायिक परिसरमा डेमोक्रेटिक नेशनल मुख्यालयमा तोड्न लागेका थिए। अनुसन्धानको रूपमा, निक्सन र तिनका सल्लाहकारहरू अपराधहरू पूरा गर्न काम गरे।
वियतनाम युद्धको अनिवार्य: भियतनाम युद्धको क्रममा भएको प्रमुख घटनाहरू सिक्नुहोस्। 2.5 मिलियन भन्दा बढी अमेरिकी सेनाले अन्ततः यो अत्यधिक विवादास्पद युद्धमा समावेश गरेको थियो।
अन्य राष्ट्रपतिको फास्ट तथ्य
Lyndon B. जॉनसन : निक्सन को पूर्ववर्ती वियतनाम को युद्ध ले लामो समय सम्म यो हल भएको थियो र बायाँ कार्यालय को हल भयो। कार्यालयमा उहाँका वर्षहरू नागरिक अधिकार अधिनियम, मार्टिन लूथर राजाको हत्या, र मेडिकल र मेडिकाइडको सिर्जना पनि समावेश गरिएको थियो।
ग्रिल्ड फोर्ड : 1974 मा निक्सन को इस्तीफा पछि राष्ट्रपति को रूप मा फोर्ड को रूप मा राखयो। उनले निक्सन को पद समाप्त गर्नेछन् तर उनिहरु को चयन नहीं गर्नेछन्, उसलाई निर्वाचित गरे या पहिले उपराष्ट्रपति को रूप मा पहिले सेवा को लागी केवल राष्ट्रपति बनाउन को लागी।
जर्ज एचडब्ल्यू बुश फास्ट तथ्य
वुड्रो विल्सनबाट उद्धरण
Ulysses S. को बारे मा जान्न को लागि शीर्ष 10 चीजें
कार्यकारी आदेश 11085: राष्ट्रपतिको पद स्वतन्त्रता
विलियम म्याककेनी - संयुक्त राज्य अमेरिका को बीस-पचास राष्ट्रपति
यूहन्ना एडम्सको अन्तिम शब्द के थिए?
Zachary Taylor फास्ट फिक्स्ड
हैरी ट्रuman को बारे मा जान्न को लागि दस चीजें
जर्ज डब्ल्यू बुश - संयुक्त राज्य अमेरिका को किस्मत-तेस्रो राष्ट्रपति
द्वितीय विश्वयुद्ध: ग्र्युमन F4F वाइकेटट
पोकरमा कसरी र कसरी बुझ्न कहिले
"अल्मा रेडेमेटोरिस मेटर" गीत र अनुवाद
नाइट बुक रिभिजन हाउस
डार्क-क्लोके इकाई द्वारा प्रेतवाधित
लोक गायक जोआन बेजको सर्वश्रेष्ठ गीतहरू
जॉन ब्राउन विश्वविद्यालय प्रवेश
अंग्रेजी छनौटमा शब्द विकल्प
7 आकस्मिक रूपमा सम्भवतः डरावना कुराहरू
CSUCI, क्याल स्टेट च्यानल टापु GPA, SAT, र ACT डेटा
कीट मात्न मा न्यायाधीश अनुष्ठान
इटालियन मा डेटिंग को लागि रोमान्टिक वाक्यांश
किन4x9को सर्वश्रेष्ठ पूल तालिका आकार हो
लाँड्री कक्ष खूनी
जर्ज फक्स विश्वविद्यालय प्रवेश
किन राइफल शून्य बन्द दायरामा रहेको छ किन लामो सीमामा लक्षित हुन्छ
एक भूत, एक पोर्टेजीस्ट र एक हिंसा बीच के फरक छ?
तपाईंले ग्राफाइट पेंसिल किन्नु अघि
पीएसआई के हो?
हलल खाने र पिउने
वाल्टर ग्र्रोपियसको जीवनी
माउंट कार्मेल को हाम्रो लेडी को प्रार्थना
के यूनानीले उनीहरूको मिथकलाई विश्वास गरे?
5 प्राथमिक विद्यालयहरूको लागि सफल समीक्षा क्रियाकलाप